मंत्री अधिकारीको संलग्नतामा ओली सरकारकै सबैभन्दा ठुलो भ्रस्टाचार ! – JanaSanchar.com
मंत्री अधिकारीको संलग्नतामा ओली सरकारकै सबैभन्दा ठुलो भ्रस्टाचार !
संबाददाता : ओम हमाल	प्रकाशित मिति: (२०७५ भाद्र ३, आईतवार) ११:५१
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारले सुशासनको नारा धेरै लगाएपनि भित्रभित्रै भ्रष्टाचार गरिरहेको तथ्य खुलासा भएको छ ।
गर्व गर्नुपर्छ – स्थापनाको ६० वर्षमा नेपाल एयरलाइन्सले दुइटा ‘वाइड बडी’ विमान किनेको छ । त्यसको खरिद प्रक्रियाले भने यसमा चस्स पार्छ । २३ अर्ब रुपैंयाँभन्दा बढीमा जहाज किन्दा सबैजसो कारोबार ‘नक्कली’ गरिएको छ । यसमा ठूलो मात्रामा चलखेल भएको प्राप्त कागजातहरूले देखाएका छन् । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
(२०७५ भाद्र ३, आईतवार) ११:५१ मा प्रकाशित